पोखरा महानगरका बरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेल बेपत्ता | Jukson
पोखरा महानगरका बरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेल बेपत्ता
पोखरा लेखनाथ महानगरापालिकाका बरिष्ठ अधिकृत ओमराज पौडेल बेपत्ता भएका छन् । मर्निङवाक जाने भनेर शनिबार विहान ५ बजे घरबाट निस्केका पौडेलको अवस्था अझै पत्ता लागेको छैन ।
स्थानीयले महेन्द्रपुलबाट सेती नदीमा हामफालेको भन्दै दिएको सूचनाको आधारमा शनिबार प्रहरीले सेती नदी वरपरसमेत खोजी गरेको थियो । विहान साढे ५ बजे हरियो टिसर्ट लगाएको व्यक्ति सेतीमा हामफालेको देखेको र आफूले तत्कालै प्रहरीमा जानकारी गराएको स्थानिय प्रत्यक्षदर्शी शान्ती श्रेष्ठले बताएकी छन् । प्रहरीले सेती वरपर रेस्क्यू टोली नै प्रयोग गरेर खोजी गरेपनि आझैसम्म केहिपनि पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
यसैबीच, पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले बरिष्ठ अधिकृत पौडेलको बेपत्ताप्रति महानगर स्तब्ध भएको उल्लेख गर्दै उनको खोजीमा सघाइदिन अपील गरेको छ ।
प्रमुख जिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पोडेलको खोजीका लागि कुनै कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
बिग एफएममा न्यूनतम पारिश्रमिक लागू
This Body-builder Almost Died After Getting synthol Injections! Be Carefull Guys !!!
गाउँको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै भिटोफ
भद्रपुरमा वडावासीको आर्थिक सहयोगमा अस्थायी प्रहरी बिटलाई मोटरसाइकल
यसरी छुट्याउन सकिन्छ नक्कली र सक्कली चार्जर